दक्षिण कोरियाली पूर्वराष्ट्रपति पार्क ग्वेन हाइ जेलको कोठरी कसरी पुगिन् – Hotpati Media
दक्षिण कोरियाली पूर्वराष्ट्रपति पार्क ग्वेन हाइ जेलको कोठरी कसरी पुगिन्
१९ चैत्र २०७३, शनिबार १०:३३ मा प्रकाशित (4 बर्ष अघि) अनुमानित पढ्ने समय : १ मिनेट
सोल – सन् २०१२ को अन्त्यमा दक्षिण कोरियामा पहिलो महिला राष्ट्रपति बनेर इतिहास रचेकी थिइन्, पार्क ग्वेन हाइले। तर तिनै पार्क कार्यकाल पूरा गर्न नपाई महाअभियोगबाट हटाइएकी प्रथम दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति बनिन् र अब जेल पुगेकी छन्।
‘म आशाको नयाँ युगको शुभारम्भ गर्नेछु, जहाँ प्रत्येक नागरिक हाम्रो देशको तागतको आधार बन्ने छन् र त्यसको लाभ पत्येक कोरियालीले पाउनेछन्,’ उनले राष्ट्रपति बनेपछि भनेकी थिइन्। उनले दक्षिण र उत्तर कोरियाबीच विश्वासको वातावरण बनाउने पनि बताएकी थिइन्।
कोरियाली प्रायद्वीपलाई द्वन्द्व क्षेत्रबाट विश्वासको क्षेत्रमा बदल्न ‘ट्रस्टपोलिटिक’ को नीति अँगाल्ने घोषणा उनको थियो। तर उनको कार्यकालमा दक्षिण कोरियाली नागरिकको उनीमाथि रहेको विश्वास समाप्त भयो।
पार्क किन भइन् पदच्युत?
उनका पिता पार्क चुङ हीले सैनिक कु मार्फत १८ वर्ष कोरियाको शासन गरेका थिए। सन् १९६१ मा सत्ता हत्याएका उनले सन् १९६३ पछि निर्वाचित राष्ट्रपतिका रुपमा शासन गरेका थिए। सन् १९७४ मा पार्ककी आमाको हत्या भयो। त्यसपछि २२ वर्षीय पार्क दक्षिण कोरियाको प्रथम महिला बनिन्।
आमाको हत्यापछि उनको आत्मा देखेको दाबी गर्ने एक धर्मगुरुसँग पार्कको भेट भयो। चोइ ताइ मिन नामक ती व्यक्ति ‘चर्च अफ इटरनल लाइफ’ नामक एक सम्प्रदाय नै खडा गरेका थिए। उनी पार्कको गुरु बने।
सन् १९७९ मा पार्क चुङ हीको हत्या उनकै गुप्तचर प्रमुखले गरेका थिए। उनको बारेमा दक्षिण कोरियामा विभाजित मत छ। केही उनलाई आधुनिक दक्षिण कोरियाका संस्थापक मान्छन् भने केहीले तानाशाह।
उनका पिता हत्या भएपछि तिनै गुरुकी छोरी चोइ सुन सिलसँग पार्कको मित्रता बढ्यो। त्यसयता चोइ सुन सिल पार्कको निकट सल्लाहकार बनिन्।
गत नोभेम्बरमा चोइ सुन सिलले शक्तिको दुरुपयोग र ठगी गरेको भन्दै उनीमाथि मुद्दा चलाइयो। चोइले राष्ट्रपतिसँग आफ्नो सम्बन्धको फाइदा उठाउँदै आफ्ना संस्थामा करोडौँ डलर चन्दा दिन दबाब दिएको बताइएको छ। यही काण्डमा सामसुङ पनि मुछिएको छ। सामसुङ चोइको सँस्थालाई ठूलो रकम चन्दा दिने आठमध्ये एक कम्पनी हो।
त्यस्तो चन्दा उठाउन पार्क व्यक्तिगत रुपमै संलग्न भएको आरोप लागिरहेको छ। चन्दाको बदलामा चोइले सरकारी नीति तथा कामकार्वाही समेतलाई प्रभावित गरेको र चन्दा दिने कम्पनीहरुको पक्षमा निर्णय गराइएको बताइएको छ। चोइले पार्कको माध्यमबाट सरकारको अति गोपनीय दस्तावेजहरु पनि हात पारेको बताइएको छ। यो काण्डमा मुछिएका सबैले आफूले कुनै गलत काम नगरेको बताएका छन्।
सन् २०१३ मा दक्षिण कोरियाको एघारौँ राष्ट्रपतिका रुपमा उनले १८ औँ राष्ट्रपतीय कार्यभार उनले सम्हालिन्। त्यसअघि उनी ग्र्याण्ड नेसनल पार्टीमा पनि उनी दुई कार्यकाल अध्यक्ष रहिसकेकी थिइन्। सन् २०१२ मा नाम परिवर्तन गरेर ‘सायनुरी पार्टी’ राखिएको थियो।
प्रभावशाली परिवारकी भएपनि पार्कको विजयलाई पूर्वी एसियामा पुरुषप्रधानताको पर्खाल तोडेको भन्दै प्रशंसा गरिएको थियो। किनभने यो क्षेत्रमा जनमतबाट चुनिने पहिलो महिला राष्ट्रपति उनी नै थिइन्। उनी त्यो साल फोर्ब्सको शक्तिशाली महिलाहरुको सूचीमा पनि रहेकी थिइन्।
सन् २०१६ को डिसेम्बरमा संसदले उनलाई महाअभियोग लगायो भने १० मार्च २०१७ मा संवैधानिक अदालते एकमतबाट सो उनलाई पदच्युत गर्ने फैसला ग¥यो। त्यसअघि राजधानी सोलमा लाखौँ मानिसले उनीविरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए। दक्षिण कोरियामा मे ९ का दिन नयाँ राष्ट्रपतिको चुनाव हुनेछ।
शुक्रबार बिहान उनीविरुद्ध पक्राऊ पुर्जी जारी गरिएको थियो। सोल सेन्ट्रल डिस्ट्रिक कोर्टले उनलाई जेलमा राख्न आदेश दिएको छ। बाबु र आफ्नो समेत कार्यकाल गरेर झण्डै दुई दशक सोलको राष्ट्रपति भवनमा बिताएकी पार्क अब भने जेलको कोठरीमा बस्न बाध्य भएकी छन्।
कस्तो हुनेछ त उनको जेल जीवन?
पार्कलाई राखिएको ‘सोल डिटेन्सन सेन्टर’ मा महिला र पुरुष कैदीहरुको बेग्लाबेग्लै ब्लक छ। सामान्य कैदीहरुलाई १२ वर्गमिटरको कोठामा ६ जनालाई राख्ने गरिन्छ। तर प्रसिद्ध कैदीहरुलाई भने ६.५ वर्गमिटरको कोठामा एक्लाएक्लै राखिन्छ। त्यस्तो कोठामा पट्याउन मिल्ने डसना, टेलिभिजन, सानो दराज, एउटा ट्वाइलेट र सानो धारा हुन्छ। कैदीहरुलाई सातामा दुई पटक सामूहिक बाथरुममा तातोपानीमा नुहाउन दिइन्छ।
प्रत्येक कैदीलाई दैनिक तीन छाक खाना दिइन्छ। त्यस्तो एक छाक खानाको मूल्य १.३० डलर पर्ने जनाइएको छ। बाहिरी खाना लैजान प्रतिबन्ध छ।
कैदीहरुले जेलको पोशाक लगाउनुपर्ने हुन्छ। बिहान छ बजे र बेलुका नौ बजे रोलकल गरिन्छ। दिउँसो कैदीहरुलाई अनुसन्धानकर्ताहरुले प्रश्न सोध्ने र आफ्नो वकिललाई भेट्ने समय छुट्याइएको हुन्छ। वकिलसँग बिताइएको समयमा कुनै अवधि नतोकिएको हुनाले धनी कैदीहरुले धेरै समय वकिलहरुसँग बिताउने गरेको बताइन्छ।
त्यही जेलमा उनकी सल्लाहकार चोइ सुन सिल र सामसुङ प्रमुखका छोरा ली जाए योङ पनि छन्।
६५ वर्षीय अविवाहित पार्क दशकौँसम्म दक्षिण कोरियाको राजनीतिको केन्द्रमा थिइन्। त्यसैले नै उनलाई ‘राजकुमारी’ का रुपमा पनि सम्बोधन गर्ने गरिन्थ्यो। तर शक्ति र सत्ताबाट नाटकीय रुपमा च्युत भएर उनी जेल पुगेकी छन्। अदालतमा उनीमाथिका आरोप साबित भए उनी त्यो रसातलमा पुग्नेछिन्, जहाँबाट उठ्न सायदै सम्भव हुनेछ।